I-Kinvara Garden Cottage
Le ndlwana isanda kulungiswa yaseIreland ikwigadi yethu. Inegumbi lokuhlala eliqaqambileyo elikhanyayo / lokuhlala elinebhedi yesofa, igumbi langasese / igumbi lokuhlambela, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, kunye negumbi lokulala eliphezulu. Zininzi ekufuneka zenziwe ekuhlaleni, kunye neelwandle ezikufutshane, kwaye uhambo olufutshane luya kukuzisa entliziyweni yale lali inemibalabala, eneendawo zokuzonwabisa ezidlamkileyo, iindawo zokutyela ezilungileyo, umculo waseIreland. I-Kinvara sisiseko esifanelekileyo sokuhlola i-Burren.
Nceda ufunde izikhokelo zethu zokungena apha ngezantsi phambi kokuba ubhukishe.
Sihlala kwindlu enkulu, ngoko sikufuphi ukuba kukho nantoni na oyifunayo.
I-cottage imalunga ne-10 imizuzu yokuhamba ukusuka kumbindi welali. Ngelixa useKinvara uya kufumana imarike yamafama eveki yonke (iinyanga zasehlotyeni, ngolweziHlanu), ii-pubs zemveli zase-Irish ezinomculo wasebusuku kunye neendawo zokutyela ezimbalwa, kunye negrosari, iposi, njl.njl malunga nemizuzu eyi-10 ngemoto. kukho unxweme lwaseBlue olubizwa ngokuba yiTraught.
IBurren kukumgama omfutshane wokuhamba apho kukho ukuhamba okumangalisayo kunye nokuhlola okunokwenzeka.
I-Kinvara isiseko esithandwayo apho uphonononga amawa e-Moher, i-Doolin, i-Burren, kunye nezinye iindawo zobuhle.
Sobabini siyavuya ukudibana kunye nokuncokola neendwendwe. Sihlala apha iminyaka embalwa, kwaye uCatherine wazi izinto ezininzi ezintle ekufuneka zenziwe kwaye zibonwe ekuhlaleni. Ngokulinganayo, sonwabile ukushiya abantu eluxolweni lwabo/uluvo lokuzonwabisa, ukuba yinto oyithandayo leyo.
Sobabini siyavuya ukudibana kunye nokuncokola neendwendwe. Sihlala apha iminyaka embalwa, kwaye uCatherine wazi izinto ezininzi ezintle ekufuneka zenziwe kwaye zibonwe ekuhlaleni.…